Suuq-weynaha Haweenka Ugu weyn Aduunka iyo Sida Loogu Ganacsado (Sawirro) – Radio Daljir
Agoosto 14, 2017 6:29 b 0
Suuqa Hooyooyinka, waa suuqa haween-weynaha adduunka ay ku ganacsadaan kan ugu weyn. Dacalladiisa iyo meel kasta oo kamid ah waxaa ku gacansada dumar. Cimrigiisu wuxuu gaarayaa 500 oo sanadood. Wuxuuna ku yaallaa bartamaha Imphal, gobalka Manipur ee dalka Hindiya.
Suuqu sidoo kale wuxuu uu noqday xarun doodeedka furan iyo wadahadalka ee dowladda iyo ururrada haweenka. Taariikhdiisa waxaa dib loogu celiyaa markii Manipur uu ka talin jiray boqorradii Muslimiinta mid kamid ah. Waxa cajiibka ah ayaa ah in suuqa ay kaliya ku ganacsan karaan haweenka la qabo.
“Kanina waa mid lamid ah ganacsiga qoyska ee lagu yaqaan xaafadaha – homebusiness, waxaana aan fadhiyaa isla goobtii ay ku ganacsan jireen waalidiintayda,” Anoubi Devi, oo 81-jir ah ayaa u sheegtay Wariye Nilesh Wadhwa.
Haweenay Muslimad ah oo Lagu Khasbay Inay Xijaabka Tuurto Ayaa Lagu Abaalmariyey 85,000